Raad Raac News Online – Madaxda Cusub ee Soomaaliya loo doortey maka dhabaa mise waa ka dhalanteed nidaamka faderaliga? Maqaalka Todobaadka
Madaxda Cusub ee Soomaaliya loo doortey maka dhabaa mise waa ka dhalanteed nidaamka faderaliga? Maqaalka Todobaadka
Faarax November 12, 2012 0
Nidaamkan federaaliga ah ayaa u muuqda mid somaaliweyntii kala tagtey dib isugu soo ururinkara oo tusi kara in ay mar labaad ay dhisaan Dawladii Soomaaliya oo ka duwan tii hore ee ahayd in Soomaalidu isugu timaado hal meel oo wadanka intiisa kalena laga soo haajiro.
Nidaamka faderaaliga ayaa markii la rog rogey oo dhinacyo badan laga eegay waxaa uu ugu muuqday Soomalida kala luntey oo kala bariday in ay dib u yagleeli karto kalsoonidii ka dhexaysay shicib weynaha Soomaaliyeed. Isla markaana dib u yagleeli doonta in lays aamino oo wax wada qabsina yimaado.
Isla markaana dalka oo dhan uu dib u dhis iyo dib u habeyn dhinac walba leh ku bilowdo, waayo marka laba gobol iyo wixii ka badanba ay is raacaan oo ay nidaam iyo kala danbeyn samystaan kadibna u gudbaan in xiriir wada shaqeyn lays dhaafsado iyo dariswanaag.
Nidaamkan ayaa noqon kara mid dalka oo dhan ka hirgala dibna u soo celiya sumcadii soomaali lahayd iyo kalsoonidii dadka ka dhexeysay meeshana ka saara dulmiga, sadbursiga iyo isbalaarinta aan sharciga ahayn iyo weliba 4.5 oo aan xaq ahayne hada xal ah.
Soomaalidu waxey ku dhaqmi jirtey nidaam iyo xeer hoosaad waafaqsan habka federaaliga waayo waxay sameysan jireen qoysas wada socda oo wax ka dhexeeyaan oo odayaal loo doortey hogaamiyaan dhib iyo dheefna wadaagaan.
Hadaba waqtigan aynu joogno waxaa dib u soo noolaatay in inta isfahami kartaaba ay wax isku darsato oo ay ka tashato aayahooda iyo sidii ay dadka ula noolaan lahaayeen.
Sanadkii 2004 shirkii lagu qabty dalka Kenya ayaa waxaa Soomaalidii oo dhib iyo shido ka soo daashey oo garowsatey in wax dalka burburiyey uu yahay sadbursi, dulmi iyo dhulbalaarsi.ay isla garteen in Nidaamka Federaaligu yahay midka kaliya ee dib loogu soo noolaan karo kalsoonidii lunteyna lagu soo celin karo xaqii iyo xoolihii layska haysteyna laysugu soo celin karo.
Mahadi ha ka gaartee ragii arinkaa gartey waxaa ay ahaayeen ragii bilaabey dhibtii soomaali ka dhacdey, waxayna u arkeen hadii Soomaaliya mustaqbal iyo dib u soo nooleyn loo rabo in habkan kaliya uu soo celin karo iyadoo aysan marnaba dhici karin in marlabaad si sahal ah laysku aamino oo soomaali soo noqoto.
Waxaa markiiba nidaamka federaalka dhidibada u taagey Maamulka Puntland oo ahaa kii ugu horeeyey ee qaata habka federaaliga ah oo dustuur iyo nidaamkiisa goonida u ah waafajiyey soomaaliadda intee kalena hurmuud uga noqdey in nidaamkan uu yahay kan kaliya ee dalka dib u soo celin karan dadkan dib isugu soo celin kara.
Hadaba maxaa nidaamkani xanbaarsan yahay oo dadka qeybtii ugu arkaan dacar?
Nidaamkani waxa uu xanbaarsan yahay
Dib usoo nooleynta kalsoonida shacabka oo muhiim u ah in Soomaaliya mar labaad ay cagaheeda isku taagto iyadoo kaashaneysa kalsoonida shacabkeeda.
Dib u dhiska dalka oo hal mar wada bilowda iyo dadka oo adeegyada ay rabaan ka helaya meesha ay joogaan iyagoo aan u dhibtoon una safrin.
Qof walba oo xor u noqda in uu dabaqo nidaamka xisbiyada badan iyo dimuqraadiyad ka hirgasaha dalka.
Amaanka oo noqda barbarkey ka baxdaa waa bakeyla qaleen, halmeelna looga soo wada jeesto waxa xun oo loo arko in uu dadka dhibayo.
Kaabayaasha dhaqaalaha oo badanaya, maalgalin iyo ganacsiga oo noqonaya mid hela horumar aan xadlahayn.
Dalka oo siyaasadiisu noqoneyso Nidaamka loo yaqaan “T” solution macnaheedu waxa weeye waxyaabaha aynu isku khilaafsanahay meel gooni aynu wada dhigano waxa aan isku waafaqsanahayna meel gooniya aynu dhigano, ka dibna aynu wada fulino waxaynu isku waa faqsanahay hadii taa la helo waxaan isku khilaafsanahayna waa ay xalismayaan madaama aynu ka shaqeynayno waxa inaga dhaxeeyo oo wanaaga ah.
Dawlada hada Soomaaliya u dhalatey sida aynu ognahay waxaa dhalay dastuur federaali ah oo Soomaali oo dhan isla qaadatey oo ay wada ansixisay 2012.
Hadaba in badan oo indho indheysa siyaasada Soomaaliya ay waxey is weydiisay
-Dawlada hada dhalatey ma ka dhabaa mise waa ka dhalanteed nidaamka federaaliga ah? Waxaa arintaa keenay in lays weydiiyo
Gudoomiyaha barlamaanka VS federaalka.
Waxaa gudoomiyaha barlamaanku ahaa nin aqoon yahan ah shacabka Soomaaliyeed in uu sharciyada iyo nidaamkan aqoon u leeyahay isla markaana masiirka lagu aamini karo hadaba maxaa ay noqon kartaa suurada rasmiga ah ee Prof. Jawaari ma ka dhabaa mise waa ka dhalanteed in federal aan nahay.
Looba joogee weli afkiisa waa ay ka muuqataa in nidaam federaali ah lagu doortey loona dhaarshey hirgalintiisa.
Madaxweynaha Dalka VS Federalka
Tobankii bishi tobnaad 2012 ayaa la doortey madaxweyne xasan sheikh maxamud oo in badan oo bulshada rayidka ah iyo shicib weynaha Soomaaliyeed ay u arkeen is bedelkii ay doonayeen in ay heleen taas oo lagu sifeeyey waa aqoon yahan, waa waayo arag iyo waa nin ka war qaba shalay iyo maantaba.
Waxaa lays weydiiyey xasan sheikh federalnimadu ma ka dhabaa mise waa ka dhalanteed? Isla markiiba dadka indho indheeya siyaasada iyo isbadel bedelkeeda waxa ay ku macneeyeen mayee waa ka dhalanteed.
Maxaa sidaa loo yiri ! waxaa lagu doortey dastuur federaali ah waxaa loo dhaarshey dal federaal qaatey madaxtinimadiisii “ilaa maanta afkiisa lagama hayo wax tilmaamaya ama taageeraya ama tusaya Nidaamka federaliga ah ee uu hogaamiyaha u yahay inuu bulshadiisa u sheego ama kala sheekeysto ama ugu sheekeeyo.
Dadka rog roga siyaasada ayaa waxaa ay tilmaamayaan ka aamusida ama sheegid la’aanta xasan sheikh waa ma doonayo lakiin ma diidi karo.
Xasan sheikh dhabtii ma doonayo oo markii dastuurka howshiisu socotay doodihii VOA ka bixi jirey waxaa uu ka mid ahaa dadkii aadka ugu soo horjeeday in dastuurka federal lagu magacaabo ama lagu qoro wuxuuna ku sababeyn jiray uma bisla dadka soomaaliyeed, taas oo ay beenisay in ka badan 1000 ergo oo laga soo xulay Soomaalida oo dhan ay isku raaceen iyagoo matalay shicib weynaha Soomaaliya.
Ma diidi karo waxaa lagu macneeyey waa lagu doortey waana lagu dhaarshey in uu dalka iyo dadka ugu shaqeeyo si cadaalad ah iyo hufnaan iyo rabitaanka shicibka Soomaaliyeed ila habeenimadii la doortey saacadu markey ahayd abaarihii 9:00 fiidnimo dhaartaas oo aad ka dheehan karto Somali Chenel TV oo ku soo qaata mar walba oo war soo galayo.
waxaa hada soo shaacbaxaya inuu Madaxweynaha si toos ah u diido faderlisamka waayo waxaa uu dagaal aan gabaad lahayn ku hayaa hanaanka nidaam soo unkida ka socota Gobolada Jubooyinka iyo Gedo oo dadka halkaa degan ay mudo afar sanadood ah soo wadeen maanta oo gebo gebo u tahayna uu madaxweynu buur dheer iyo mid gaabanba u korayaa sidii uu uga saari lahaa habkan soomaali wada qaadatey oo isaga lagu soo doortey isla markaan kitaabka quraanka ah uu ugu dhaartey.
Waxaa uu soo magacaabey ra’iisul wasaare aqoon yahay ah oo bulshadu soo wada dhaweysay loona arkay inuu yahay nin Xasan sheikh soo xushay in ay wada shaqeyn karaan isna fahmi karaan si looga fogaado dhibaatooyinkii dawladihii hore ee dalka soomaray soo wajahay is qab qabsi siyaasadeed oo ka imaan jiray madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha.
Saacid ma ka dhabaa mise waa ka dhalanteed nidaamka federalka?
Bil ka dib markii la soo doortay madax weynaha waxaa uu si rasmi ah ugu dhawaaqey in mudane saacid uu yahay ra’iisul wasaaraha dawlada federalka ah ee Soomaaliya afarta sano ee soo socota. Taas oo golaha wakiilada dalka ay aqlabiyad buuxda ku ansixiyeen Mudan Saacid.
Waxaa uu soo dhisay dawlad kooban oo lagu macneeyey dawlada tayo iyo tusaale noqon karta dalka lakiin in isaga iyo madaxweyne xasan uu federalku ka dhalanteed yahay ama aysan u soo jeedin ama aysan aaminsaneyn ayaa soo shaacbaxdey ka dib markii la daalacdey liiskii ay soo saareen ee golaha wasiirada dawlada federalka ee Soomaliya.
Taas oo ay ka maqneyd wasaaradii ugu muhiimsaneyd oo larabey in ay hirgaliso nidaamka curdanka ah ee Soomaali isku raacdey “ Wasaarada Dastuurka iyo Hirgalinta Arimaha Federalka” waxaan filayaa soomaalidu kuma baraarugin arinkaas lakiin dadka siyaasada rog roga ama xeel dheerinimada u leh waxa ay miiska soo saareen in NIDAAMKA FEDERALIGA AH UU KA YAHAY MADAXDA SARE EE DALKA DHALANTEED.
Hadaba maxaa la gudboon dadkii doortey nidaamkan federalisimka ah??????
Qore: Mr. Adan Farax Siciid ( Adan Kimiko)
Aqoonyahan ku xeeldheer hirgalinta nidaamka federalka
Una shaqeeya dawlad ku dhisan nidaam federali ah.